1 Download facetime daaqado PC iyo 32bit Laptop – 64waxoogaa
1.1 Codsiga Windows:
1.3 Qaar ka mid ah Features coolest ee FaceTime
2 Shuruudaha FaceTime:
2.0.1 FaceTime Wajahadda:
Download facetime daaqado PC iyo 32bit Laptop – 64waxoogaa
U soo Degso Wareegtada loogu talagalay PCHello Facetime caadaysatay! Haddii aad tahay taageere weyn u ah app facetime iyo la isticmaalayo on your iPhone iyo MacBook ka dibna waxa kale oo aad ka heli kartaa app this on your pc window.
Facetime daaqado 10
Facetime daaqado pc 10
Facetime daaqado 8
Facetime daaqado 7
Facetime daaqado laptop
facetime daaqado 10 cnet
Calashaan aad u baahan tahay in la raaco qaar ka mid ah tabaha in download iyo rakibi Facetime on your pc Window.
Sidaas article Tani waxay siisaa dhammaan xogta muhiimka ah oo ku bari doonaan sida aad awoodid download iyo rakibi facetime on boosteejo Non-macruufka ah sida Windows 7, 8 iyo Window 10.
FaceTime waa mid ka mid ah Apple ee video iyo yeedhidda audio app ugu caansan. In la soo dhaafay, dadka loo isticmaalaa in lagu xiriiriso kasta oo kale iyadoo la kaashanayo telefoonada dhaqanka ama gmail laakiin FaceTime si wayn habkani bedelay. Haddaba dadka ku haboon samayn kartaa taleefan, fariimaha iyo wicitaano xataa video iyadoo la kaashanayo of this app Facetime.
U soo Degso Wareegtada loogu talagalay PC
Tani waxay u ogolaaneysaa in aad telefoon in aad ku xiran in ay dadka kale via network gacanta ama xiriir Wi-Fi. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala si ay u sameeyaan wicitaanada video aan xad lahayn in ay saaxiibadood, qoyska iyo ganacsiga xiriir la iPod ah oo ay taageerayaan, iPhone, iPad, Mac ama Windows via videotelephony online.
App Tani ayaa la yaab hoos u masaafada dadka ka mid ah oo aad u aad u fudud in ay ku sii xiriiri kartaa nolosha shakhsiga ah iyo xirfad.
Markii hore, Apple horumariyo codsiga qalabka os ay macruufka iyo Mac iyo ka dib on, sababtoo ah halka ay caan, waa hadda diyaar u ah daaqadaha iyo sidoo.
Laakiin si ay u leeyihiin app this on your uu furmo suuqa aad u baahan tahay rakibaadda dhinac saddexaad. In this article, waxaannu wadaagi doonaa rakibaadda stepwise codsigan in la adeegsadaa iyada oo daaqado.
Haddii aad rabto in aad ogaato waxa ku saabsan dheeraad ah, fadlan continue reading our article. Waxaan sidoo kale la wadaago doonaa qaar ka mid ah macluumaadka wargelin ah oo xiiso leh oo ku saabsan arjigaan.
By dhamaadka this article, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysatid app Facetime jecel on daaqadaha waxay noqon doonaan.
FaceTime ayaa noqonaya mid ka mid ah video ah apps coolest baaqay video taleefoonka online iyo ayaa meesha ka saaray dhammaan tartamayaasha kale Rafaa sida Google Duo, Skype, WhatsApp, IMO, bingo iyo liiska. App wuxuu xaq waxaa haboon bixinta tayo sare leh iyo natiijooyinka muuqaal iyo maqal ah oo joogto ah.
Muuqaal kale oo tartan rasmi ah ee app this waa waxa ay leedahay interface user-saaxiibtinimo. Qaar kale waxay kaga baayacmushtari jireen jilicsan ee software suuqa awoodin in ay bixiyaan bandwidth in.
Shirkadaha-dhinac saddexaad sii daayay software si ay u suurtagelinayso in qof kasta si loo soo dajiyo codsiga rasmiga ah ee Apple ayaa Windows 7 ama ka dib. Hadda, waxaa suurtagal ah aad u FaceTime daaqadaha si iPhone, daaqadaha si iPad, daaqadaha si Mac & daaqadaha daaqadaha.
All aad u baahan tahay waa xiriir internet oo joogto ah oo codsiga gebi ahaanba waa bilaa lacag in ay isticmaalaan on daaqadaha.
app FaceTime ka sareeyaa software kale videotelephony oo dhan sida kor lagu sharaxay. Images yihiin wax badan ka af iyo muuqaallada qeexitaanka sare waa jiidashada ah in ay ku badallano dhammaan fursadaha kale ee lagu iibiyo suuqa online.
Qaar ka mid ah Features coolest ee FaceTime
FHD- Qeexid sare Full muuqaal ah waa qayb muhiim ah ee codsiga.
Friendly user-interface ka dhigaysa in ka badan interactive isticmaalayaasha
Isticmaalka waa hab u ballaadhan aad ku xidhan karto meel kasta iyo waqti kasta.
Easy in uu abaabulo liiska xiriir
liiska ugu cadcad ee aad la xiriirto kaa caawinaysaa in aad gaadho in kaliya hal click
Free of yeedhayso kharashka waa meel kale oo lagu daray of joogtid xiran.
Group yeedhayso video aad u saamaxaaya in ay ku xidhmaan dadka isticmaala badan waqti isku mid ah.
Qoraalka sidoo kale waa suurto gal codsiga.
Emaillada iyo dadka isticmaala aan muhiim ahayn in la qarin karo ama ka mid ah liiska hor istaagay.
Users ku xidhan karto qalabka kala duwan sida PC, Windows, iPhone, iPad, iPod, Mac.
Kuwani waa sida soo jiidashada ah in aynu nahay in Akhristeyaasheena jeclaan lahaa in ay la kulmaan codsiga. Waxaa muhiim ah in la fahmo shuruudaha asaasiga ah ka hor inta ku rakibidda app FaceTime ah daaqadaha. Shuruudaha asaasiga ah waxaa ka mid ah
Your daaqadaha version waa inuu ugu yaraan XP. Waayo aragnimo fiican, waxaan soo jeedin lahaa waa in aad leedahay daaqado & ama qoraalkii ka dib.
The xawaaraha processor waa in ay ahaadaan ka badan 1GHz.
The RAM waa in ay ugu yaraan 2 GB ama kor ku xusan.
Waxaa waa in ay taageerto dhisay-in camera yeedhayso video ama haddii kale ka heli camera a qaadan karo taageeray ujeedada this.
Waayo, yeedhayso audio, waa in aad haysato a makarafoonka. Privacy walaacsan users waa in ay isticmaalaan headphones la dhisay-in mikroofanada.
Ugu muhiimsan waa in ay leeyihiin hufan xirnaanta internet.
Sida ku xusan FaceTime in hore waa app rasmi ah Apple oo ku dhiirigelinayaan in uu weli ma sii daayay version kasta oo daaqado kaliya.
Sidaas waxa kaliya ee aad heli kartaa codsiga ka website-ka rasmiga ah ee format APK loo isticmaalo dhammaan qalabka macruufka iyo Mac. Nasiib wanaag for Windows, waxaan leenahay barnaamijyo qaar ka mid ah laga heli karaa online si ay u rakibi barnaamijyada dhinac saddexaad.
Ha nala Akhristeyaasheena wadaagaan halkan Tallaabada by nidaamka dajinta tallaabo halkan:
emulators Android ayaa la sii daayay by horumarinta cid saddexaad si loo soo dajiyo qaab oo kala duwan. Kuwani codsiyada software kuu ogolaanayaa inaad u ordaan APK files format of FaceTime on daaqadaha aad. Haddii ay hore u la geliyo nidaamka, kaliya raaci doonaa habraaca ku. Waayo, newbies ah, fadlan kala soo bixi BLUESTACKS ka link la siiyey:
Tani waa page guriga of www.bluestacks.com ah
The nidaamka iyo software yihiin gebi ahaanba sharci si dib u fadhiiso oo nasato.
size file waa weyn oo qiyaastii. 469MB iyo waxa ay qaadan doonta muddo ah si aad u soo dejisan.
Ka dib waxaa la soo bixi, rakibi oo mar waxaa la sameeyaa, guuleysatey daaqadaha aad.
codsiga bluestacks Open ka menu bilowga. Waqti ayey qaadan doontaa in la bilaabo deegaanka iyo default u hagaagsan ee apps ugu horeysay ay bixiyaan barnaamijka. Sidaas ma kala go'do geedi socodka hore.
Marka barnaamijka bilaabo, tagaan si ay menu iyo riix codsiyada dukaanka play.
In ka dukaanka play, heli FaceTime in doorasho raadinta.
Download app oo guji "baxsad"Si toos ah rakibi codsiga. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in badbaadin download faylka haddii aad rabto in aad mar dambe loo soo dajiyo.
Marka aad diyaar u tahay in rakibi codsiga on nidaamka iyo raac tilmaamaha.
Inta lagu guda jiro habka rakibo, aad la keentay kartaa xuquuqda maamulaha ama password maamulaha ama xaqiijinta. Fadlan ku qor password loo baahan yahay ama macluumaadka wax weyddiiyey.
Ugu dambeyntii, FaceTime uu diyaar u yahay si ay u isticmaalaan on your daaqadaha.
Abuur aad user gaar ah Id iyo password oo la mid ah ayaa loo isticmaali doonaa mar kasta oo aad jeceshahay in aad login.
Marka aad ku ordi doonaa app ah markii ugu horeysay, aad la keentay doonaa in ay galaan Id user iyo password. Sida aad hore u abuuray aad ID user gaar ah u gaar ah iyo password, Halkan waxaa looga baahan yahay in ay sii ordi barnaamijka. Marka geeddi-socodka ID abuurka gaar ah bilowga ah waxaa loo sameeyaa, interface ugu weyn ee lagu soo bandhigi doonaa.
Dhammaan xiriirada daray, qarsoon ama xidhmey waxaa laga maamulaan interface ugu weyn. Tag doorbidida dhigay si ay u Customize sida shuruudaha aad. Like iPhone, iPad, iPod & Mac, waxaad sidoo kale ka ciyaari kara meel bandhigay. Halkan ma aha in aad isku shaandheyn daaha waa inaad laakiin waxa aad sameyn kartaa qaar ka mid ah isbedel la doorashada la heli karo.
Haddii aad isticmaalayso FaceTime markii ugu horeysay oo doonayay in ay wax dheeraad ah ogaato waxa ku saabsan, sidoo kale waxaad booqan kartaa bogga internetka taageero ay u hayaan qaar ka mid ah macluumaad faahfaahsan oo. link waxaa hoos ku siin:
Caalamiyeynta ayaa ka caawiyay dadka adduunka oo exposures dheeraad ah iyo horumarka. FaceTime ma aha oo ku saabsan dhaliyay biir ama bakeerigaagu iyo waxa nool oo la saaxiibadaa iyo qoyskaaga wadaagaan kaliya.
Waxaa ballaaran ka caawiyay suuqa caalamiga ah in ay sii joogaan xiran kasta oo kale.
Apple waxaa si joogto ah sii daayo versions cusub oo FaceTime natiijada fiican iyo gaar ahaan kadambeeya shuruudaha user ee.